Mavhesi eBhaibheri Pane Zvepamusoro: Hasha -> Hunhu Hakaipa
Hunhu Hakaipa: [Hasha]
 Kushatirwa mungashatirwe zvenyu asi musapare chitadzo. Musavidze zuva makashatirwa muchipa Dhiabhori mukana. Mbavha ngaachirega kuba ichiita basa kwaro namaoko ayo [rinoiraramisa] kuti ibatsire vasina chokubata. Mumuromo menyu ngamurege kubuda mazwi akaora asi mazwi ayo chete anovaka anofambirana nezviripo kuti ape chikomborero vanenge vakateerera. Muregewo kutsamwisa Mweya Mutsvene waMwari nokuti ndiye wamakapiwa naye rupawo kuitira zuva reruponeso. Bvisai mamuri nduramwa dzose nokutsamwa, nehasha nokupopota namakuhwa nouipi hwose.
Benzi rinoratidza hasha dzaro dzose asi munhu akangwara anozvibata achizvidzora.
Usakurumidze kushatirwa nokuti mumwoyo yamapenzi ndimo mumusha madzo hasha.
Munhu wehasha anomutsa muchokoto asi ano mwoyo murefu anopodza gakava.
 Chii chinokonzera hondo uye chii chinokonzera kurwisana pakati penyu? Hadzisi havi dzenyu here dzinokonzera kurwisana mukati memitezo yenyu? Munoda chinhu motadza kuchiwana nezvo munobva monouraya. Munochiva chinhu asi motadza kuchiwana nezvo morwa zvokuita hondo. Hamuwani chinhu nokuti hamukumbiri.
Munhu asingakurumidzi kushatirwa ari nani pane vana masimba, munhu anozvitonga ari nani pane anokurira guta.
Usaite ushamwari nomunhu wehasha kana kufambidzana nemunhu wokutsamwa
 Regera kuita hasha, usaite godo rega kuzvidya mwoyo zvinokupinza munezvakaipa, nokuti vakaipa vachaparadzwa asi vanotarisira naTENZI vachava ndivo varidzi venyika.
Mwari mutongi akarurama; pane mhosva anoti pane mhosva mazuva ose.
2 Madzimambo 11:9-10
 Vakuru vakuru ava vakaita sezvakanga zvanzi nomupristi Jehoyadha zviitwe. Mumwe nomumwe wavo akauya navanhu vake vakanga vasingafaniri kuva pabasa musi weSabata navaye vakanga vachifanira kuva pabasa musi weSabata vakauya kumupristi Jehoyadha. Mupristi akapa vakuru vakuru ava mapfumo nenhoo zvaiva zvamambo Dhavhidhi zvaiva zviri mumba yaTenzi.
2 Madzimambo 17:18
Naizvozvo Tenzi akashatirirwa kwazvo vokwaIsiraeri, akavabvisa pameso pake. Hapana vakasara kunze kwevedzinza rokwaJudha chete.
Munhu asingakurumidzi kushatirwa munhu anonzwisisa, asi anokurumidza kushatirwa, anoita kuti upenzi huwande.